Ku raaxayso safarka, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Safar wanaagsan ma qaadatay? Tani badanaa waa su'aasha ugu horeysa ee lagu weydiisto markaad ka degto diyaaradda. Imisa jeer baad ka jawaabtaa: «Maya, waxay ahayd cabsi daran. Diyaaradda ayaa goor dambe dhacday, waxaan helnay duullimaad kacsan, ma jirin wax cunno ah oo hadda madax xanuun ayaa i haya! ” (Haah, taasi waxay umuuqataa inay igu dhacday kadib markii mid ka mid ah duulimaadyadayda aan raaxo badnayn!)
Waxaan ka xumahay inaan maalin dhan khasaariyo oo aan meel keliya uga safro oo meel kale u safro; Taasi waa sababta aan u isku dayo inaan u isticmaalo waqtiyadayda safarka si uun. Waxaan had iyo jeer qaadata buugaag dhowr ah, waraaqo looga jawaabayo, qodobbada in wax laga beddelo, cajalado maqal iyo dabcan xoogaa shukulaato ahaan loo cuno! Markaa xitaa haddii uu fuulku fuulmay ama aan soo daahay, haddana waxaan dhihi karaa waan ku raaxaystay safarka maxaa yeelay maba fadhiisan inaan ka walwalo dhammaan noocyada wax qaldama ama xanaaqa.
Sow noloshu sidan oo kale mararka qaarkood ma aha? Noloshu waa safar; sidoo kale waan ku raaxeysan karnaa oo aan u adeegsan karnaa waqtiga uu Eebbe ina siiyay, ama aan la halgami karno duruufaha oo aan rajeynno inay waxyaabo si ka duwan sidii hore ahaan lahaayeen.
Si uun nolosheena ayaa ka kooban maalmaha safarka. Waxay umuuqataa inaanu hal meel ugusoo cararayno, una degdegeynno ballamaha si aan ula kulanno dadka oo aan uga gudubno waxyaabo liiskayaga ka mid ah. Aynu weligiin dib u eegno oo si hoose u qaadno fikirka maskaxda ee maalinta oo aan dhahno, “Tani waa daqiiqad noloshayda ku jirta. Sayidow waad ku mahadsantahay daqiiqaddan iyo noloshan "?
Jan Johnson buuggeeda ayay ku leedahay "Waa inaan ku noolaano wax badan waqtigan xaadirka ah" (Ku raaxayso jiritaanka Ilaah) "maxaa yeelay waxay naga caawisaa inaan u qushuucno geedi socodka iyo natiijooyinka nolosha".
Noloshu waa wax aan ka sii shaandheeyn waxyaabaha ku jira liisaskayaga. Mararka qaarkood waxaan mashquul ku nahay inaan waxsoosaarno oo kaliya waxaan dareemeynaa inaan qanacsanahay markii aan qabanay intii suurta gal ah. In kasta oo ay fiicantahay in lagu farxo waxa aad gaadhay, haddana aad bay u macaan yihiin haddii aan "ku raaxeysanno waqtigan xaadirka ah halkii aan ka jeedin lahayn waxii la soo dhaafay ama aan ka fikirno mustaqbalka mustaqbalka" (ibid.). Kaliya maahan waxyaabaha wanaagsan ee nolosha inay u muuqdaan kuwa fiican marka aan ku raaxaysanno daqiiqad kasta, laakiin waxyaalaha xunxun ayaa noqdaan kuwo la qabsan karo markaan u aragno inay qayb ka yihiin geedi socodka oo dhan. Tijaabooyinka iyo dhibaatooyinka ma aha kuwa joogto ah, waxay u badan yihiin dhagxaan qallafsan oo wadada ku yaal. Waan ogahay inay fududahay in la iraahdo. Laakiin xasuusnow inaad horay u soo martay dhibco badan oo qalafsanaan iyo in kuwa hadda jira ay gadaal kaa gadaal mari doonaan. Waxa kale oo ay inaga caawinaysaa in la xasuusto in aannan halkan u joogin ujeedkan. Waxaan ku jirnaa wadada kale, meel wanaagsan. Bawlos wuxuu nagu dhiirrigeliyay Filiboy 3,13: 14:
Walaalayaalow, anigu uma malaynayo inaan is qaatay; Laakiin hal shay [Waxaan sameeyaa]: Waan hilmaamay waxa gadaal ka imanaya oo gaadha waxa kahoreeya oo higsanaya hadafka, qiimaha dagaalka ee yeedhitaanka Eebbe ee ku jira Ciise Masiix. "
Aynu ku sii wadno himilada maskaxda. Laakiin sidoo kale aan ku raaxeysano maalin kasta safarka oo aan u isticmaalno waqtiga. Socdaal wanaagsan!